18 kiis oo kufsi ah oo ka dhacay Puntland saddexdii bilood ee u dambeysay - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntland18 kiis oo kufsi ah oo ka dhacay Puntland saddexdii bilood ee u dambeysay
March 27, 2018 Mohammed Omer Ahmed Mulla Puntland, Somalia 0
18 kiis oo kufsi ah oo ka dhacay Puntland saddexdii bilood ee u dambeysay. [Sawirka]
Garoowe-(Puntland Mirror) 18 kiis oo kufsi ah ayaa ka dhacay gudaha Puntland intii lagu guda jiray saddexdii bilood ee lasoo dhaafay, sida uu warbaahinta u sheegay masuul katirsan Puntland.
Maxamed Xareed Faarax oo ah ku simaha xeer ilaaliyaha guud ee Puntland ayaa shir jaraaid oo uu ku qabtay Garoowe ku sheegay in 18 kiis oo kufsi ah la diiwaangashay saddexdii bilood ee ugu horeysay sanadkan 2017, kuwaasoo ka dhacay gobolada Nugaal, Mudug, Karkaar iyo Bari.
Ku simaha xeer ilaaliyaha ayaa odayaasha dhaqanka ku eedeeyay in ay qariyaan kufsiyada gabdhaha loo geysto, ayna si hoose ku xaliyaan goboodfaladaas ka dhanka ah xuquuqul iinsaanka.
Sanadkii 2016-ka, baarlamaanka Puntland ayaa ansixiyay xeerka kusfiga.